फिल्म घट्ने संकेतFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फिल्म घट्ने संकेत
फिल्मी फण्डा । लामा दिन, उच्च हिमाली क्षेत्रको मौसम समेत सफा हुने तथा पानी नपर्ने भएकाले वसन्त र गृष्म ऋतुमा सबैभन्दा बढी फिल्महरु फ्लोरमा जान्छन् । वैशाख र जेठ महिनामा अन्य महिनाको तुलनामा बढी फिल्म छायांकनमा निस्कन्छन् ।
अघिल्लो वर्ष यही महिनामा करिब तीन दर्जन जति फिल्म फ्लोरमा गएका थिए । तर, यस वर्ष अशोक शर्माको रातो टीका निधारमा, दीपकराज गिरीको छ माया छपक्कै सहित करिब आधा दर्जन फिल्म अहिले फ्लोरमा रहेका छन् ।
गतवर्ष ९६ ओटा फिल्म प्रदर्शनमा आएका थिए । ती सबै गत बर्ष नै छायाकंन भएका होइनन् । कति फिल्महरु हार्डडिक्सबाट झिकेर हलमा ल्याइएको थियो । अर्थात् अघिल्लो वर्ष नै ती फिल्महरु प्रदर्शनको लागि तयार थिए । ९६ ओटा फिल्म प्रदर्शनमा आएपनि अधिकांश फ्लप भएका थिए ।
नेपालमा फिल्म बनाउन भन्दा फिल्म प्रदर्शन गर्न गाह्रो हुने फिल्म निर्माताको अनुभव छ । तर यसपालि ढुक्क भए हुने जस्तो देखिएको छ । शुटिङको सिजनमा कम फिल्म फ्लोरमा छन् । अब, फिल्म युनिटहरुले मेरो फिल्मसँग फलानोले जुधाउन ल्याएको हो भन्ने दन्तबझान कम हुन्छ कि ? भद्रगोल हुने रिलिज क्यालेण्डरमा फिल्मको चाप नै कम भएपछि के का लागि शीतयुद्ध लड्नु ? तर, जे होस् कम फिल्म फ्लोरमा रहँदा यस वर्ष फिल्म घट्ने संकेत देखिएको छ ।